Finfinneen weerara lafaa qindaaye jalatti kufte - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Finfinneen weerara lafaa qindaaye jalatti kufte
Weerara kana fashalsuu fi daaraa isaan kaasuu malanitti bishaan firfirsuuf Inj Taakkalaa cinaa dhaabachuu qabna
Weerarri lafaa bifa qindaayeen magaalaa Finfinnee irratti geggeeffamaa jira. Yeroo baatii tokko hin geenne keessatti kutaa Boolee qofa keessatti lafa ummataa (mootummaa) 2801 samtotaan fudhatame. Kutaa Boolee qofa keessatti yeroo gabaabaa keessatti mana amantaa (bataskaana) 18tu lafa weerarame irratti ijaarame. Kana keessaa aanaa tokko qofa keessatti bataskaana 8 tu ijaarame.
Saamichi lafaa Finfinnee irratti geggeeffamaa jiru heddu yaachisaa fi qaanfachiisaadha. Inni jaarraa tokkoo oliif geggeeffamaa ture hanqannaan ammas ija teenna afotti walijaaranii magaalattiin barabaraaf Oromoo harkaa akka baatuuf hojjataa jiran. Gaafa Taabonni Koyyee Faccetti bu’e jedhamee fi naannoo Hayaatitti bataskaanni halkan tokkoon ijaarame magaalattii keessatti bifa qindaayeen maaltu akka adeemaa jiru hubachuuf agarsiisa gaarii ture. Rafaa turuu keenna kan argisiisu bifuma walfakkaatuun Taabonni/Cillaatiin bu’e ykn xaballi baye maqaa jedhuun Bolee keessatti qofa bataskaanni 18 ijaaramuu isaati.
Weerara jajjabesuu fi odeeffannoo iccitiin dabarsuu keessaa hojjattoonnis mootummaa (deep state) harka qabaahcuu isaaniiti, akka ibsa Inj Taakkalaatti. Lafa kan saamaa jiru hiyyeessaa miti. Biyyaa fi biyyaan alaa, bifa qindaayeen, saamichi geggeeffamaa kan jiru. Kana qindeessuu fi sponsor godhuu keessaa farroonni akka ABN, Iskindirii fi Nafxanyoonni biyyaa fi biyyaan alatti maandheffatan harka keessaa hin qaban jechuun hin danda’amu. Maqaa dhayuu baatanis jaarmayaaleen siyaasaa 2 weerara kana qindeessuu fi jajjabeesuu keessaa harka akka qaban kantiibaan magaalattii ifatti dubbateera.
Yeroo darbe waraqaan eenyummaa (IDn) Oromoof kenname, Laga Xaafotti manni 200 diigame jedhamee duulli badhaan nurratti baname. Isaan ammoo aanaa Boolee qofatti baatii muraasa keessatti lafa weeraranii manniin jireenyaa kumaatamaa fi bataskaana 18 seeraan ala ijaaranii nu eegan. Weerarri, seerdhabdummaan, shiraa fi tuffiin kana caale jiraa?
Amantaan kamuu weerara kanaaf dawannoo ta’uu hin qaban. Biyya seeraan bultu kamuu keessatti jaarmayaaleen amantaa kamuu seera hordofaniiti kan deemuu qaban. Saamtotaa fi weerartootaaf dawannoo laatuun yakka.
Tarkaanfiin Inj Taakkalaan fudhachuuf qophaaye baay’ee gaariidha. Heddus barbaachisaadha. Ummanni walijaaree magaalattii keessaa nubaasuuf halkan guyyaa hojjataara. Tarkaanfitti seenamnaan daaraa kaasuun, wacaan nu dhamaasuun isaanii hin oolu. Weerara kana fashalsuu fi daaraa isaaniitti bishaan firfirsuuf hundi keenna ammumaa qophii eegaluu qabna. Inj Taakkalaa cinaa dhaabachuun dirqama seenaati.
Dutiinsi sariin Iskindirii fi ABN bobbaasuu magaalatti qarriffaa weerartootaa keessaa baasuu irraa duubatti nu hin deebisu.
Previous articleKitaabni ‘Siyaasa Oromoo: Imala Obsa Fixachiisaa fi Hegeree Abdachiisaa’ jedhu gabaa irra oole
Next articleFilannoof baatii 9tu hafe. Hegereen Finfinnee maal ta’uuf?